प्रचण्डका ३० वँुदे योजना ‘प्रचण्ड आवास – प्रचण्ड रोजगार सम्म ’ सातवटै नगरपालिका एक मेट्रोसिटी « Thahaonline.com | थाहा अनलाइन
प्रचण्डका ३० वँुदे योजना ‘प्रचण्ड आवास – प्रचण्ड रोजगार सम्म ’ सातवटै नगरपालिका एक मेट्रोसिटी
२८ कार्तिक २०७४, मंगलवार २१:४१ मा प्रकाशित
चितवन, २८ कार्तिक ।चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले समग्र चितवनलाई नै समेटेर मंगलबार आफ्नो चुनावी प्रतिवद्धता–पत्र सार्वजनिक गरेका छन्।
एमालेसँग तालमेल गरी निर्वाचनमा गएका दाहालले प्रतिवद्धता–पत्रमा चितवनका सातै वटा नगरपालिकालाई एकीकरण गरी ‘चितवन मेट्रो सिटी’ बनाउने प्रस्ताव अगाडि सारेका छन्। प्रतिवद्धता–पत्रको नयाँ पक्ष चाहिँ दाहालले आफ्नै नाममा ‘प्रचण्ड रोजगार योजना’ र ‘प्रचण्ड आवास योजना’ ल्याएका छन्।
यी हुन् दाहालका ३० बुँदे प्रतिवद्धताः
प्रचण्ड रोजगार योजना
प्रचण्ड आवास योजना
चितवन, औद्योगिक नगरी
६ .पूर्वी चितवनको उपयुक्त स्थानमा तीन नम्बर प्रदेशको तेल भण्डारण निर्माण गरिने छ ।
समृद्ध माडी, सम्पन्न माडीवासीको सपना
७. माडी दुर्गम, विपन्नता र प्राकृतिक प्रकोपले वर्षेनी ठूलो जनधनको क्षति भइरहने क्षेत्र हो । यसको हल गुणात्मक ढंगले निकाल्न जरुरी छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज चितवनवासीको गौरव भइरहँदा माडीबासीका लागि कतिपय सन्दर्भमा अभिशाप बनेको छ । आगामी पाँच वर्षमा माडी र बाँकी चितवन जोड्ने गरी राष्ट्रिय निकुञ्जमा सुरुङ्गमार्ग सडकमध्ये एक निर्माण गरिने छ । यो सडक निर्माणले यातायात, विद्युत, टेलिफोन, इन्टरनेट सेवा उपलब्ध हुन सहज हुनेछ । यसको साथै रिउ कोरिडोर यसै अवधिमा पूरा गरिने छ ।
चितवन, कृषि शिक्षा र उत्पादनको मुख्य केन्द्र
सामुदायिक शिक्षामा क्रान्तिकारी विकास
समृद्ध र विकसित चितवनको सपना
१७ . नवलपुर खण्डसँग जोडेर समग्र पश्चिम चितवनको विकास गर्न नारायणी नदीमा ३ वटा थप पुल निर्माण गरिने छ ।
१८. नारायणी र राप्ती नदिमा तटबन्धन गरी फराकिलो रिङ्गरोड निर्माण गरिने छ । पूर्वी चितवनको कयर खोला, राप्ती आदि नदीमा समेत तटबन्धन गरी त्यहाँ सडक निर्माण गरिने छ ।
२० . भण्डरा–मलेखु सडकलाई स्तरोन्नतिसहित पूर्णता दिइने छ । शक्तिखोर–फिस्लिङ् सडक निर्माण गरिने छ ।
–मर्यादित र जिम्मेवार, र स्वतन्त्र प्रेस क्षेत्रको विकास र पत्रकारको सुरक्षा र क्षमता अभिवृद्धिका लागि केन्द्रीयस्तरमा नेपाल पत्रकार महासंघ र सञ्चारसँग सम्बन्धित निकायहरुले अघि सार्दै आएका माग तथा अवधारणा पुरा गर्न विशेष भूमिका निर्वाह गरिने छ ।
– चितवनमा आमसञ्चार तथा सञ्चारकर्मीहरुको सर्वाङ्गण विकासका लागि ‘आमसञ्चार प्रतिष्ठान’को निर्माण गरिने छ । – – स्थानीय तथा सामुदायिक सञ्चारलाई समानुपातिक विज्ञापन, अनुदान तथा विज्ञापनका लागि सहज हुने नीतिगत व्यवस्था र कार्यान्वयनका लागि पहल गरिने छ ।
पर्यटकीय चितवन नगरीका लागि विशेष योजना
२७। चितवन जिल्ला केही वर्षयता मेडिकल राजधानीका रुपमा तीब्र विकास भईरहेको छ । देशकै स्वास्थ्य सेवाको प्रमुख केन्द्रका रुपमा यसलाई विकास गर्न विशेष योजनाको निर्माण गरी आवश्यक पहल गरिने छ ।